Waya eriri agbaze Ma Cutting Machine - BOBO Machine Co., Ltd.
Waya eriri agbaze Ma Cutting Machine
Nke a ígwè waya eriri agbaze na ọnwụ igwe, na elu na-agba na mfe iji rụọ ọrụ, na ọdabara maka agbaze ígwè ụdọ dị iche iche akụkụ, karịsịa mbuli ụdọ, min ụdọ, kreenu Gịnị na ndị ọzọ na-elu àgwà ígwè ụdọ. Nchara ụdọ gbazee bụ mma n'anya na-eji ire ụtọ na conical na gburugburu nsọtụ. Igwe ndị a na-tumadi n'ọrụ site ígwè eriri emepụta na ahịa. (e.g. Port, jeeti mmiri, mbuli onye wdg)
Main nhazi na arụmọrụ:
1. Ọdụdọ akara usoro: iji Omron PLC, Omron ihuenyo mmetụ, Zhengtai eletriki, ntị. ampilifaya circuit ụgbọala pneumatic solenoid valvụ ọrụ;
2. fuuz usoro: iji nyefe mgba ọkụ ka ịhazie fuuz ugbu a na otutu Kwadobe họrọ 260V ma ọ bụ 440V input voltaji dị ka n'obosara nke nchara eriri; na 1-6 fuuz ugbu a.
3. Enweghị usoro hazi a set of fuuz Ebu, na ebu nwere ihe abụọ inlets, ahịa nwere ike ịhọrọ abụọ dị iche iche nkọwa nke waya eriri dị ka mkpa n'ezie, karị udia si abụọ dị iche iche inlets, onwem na 1.5mm na 2.0mm fụọ akpụzi
4. agbapụta n'ahụ usoro: Mgbe n'ịrụ fusing edinam, flaapu cylinder akpali ịrụ ebutu edinam;
5. The ngwá ike-onwem na a waya eriri ifịk orùrù ogbe: ọrụ bụ inye a ufọk ufene nri erughị ala iji gbochie oké erughị ala ma ọ bụ slack nke nri waya eriri.
Ike na izi ezi:
The igwe nwere ike gbazee 1.5-3.0 mm ígwè waya eriri, mmepụta ike bụ banyere 3.5 sekọnd kwa warara;Izi ezi nke ọnwụ ogologo bụ 1000 MM + 2 mm.
Pittsburgh mkpọchi akpụ Machine
Resin-eriri Ọgwụ Machine
BOBO na Chinese pụtara n'inwe nnuku na ike. Na-aga n'ihu na-enwe ọganihu na mmepe na abụọ gara aga ọtụtụ iri afọ, ugbu a BOBO igwe na-aghọ ndị na-eduga igwe emeputa na ngwọta soplaya na HVAC na Refrigeration ụlọ ọrụ.